सुनसरीका पत्रकारलाई चुनाव लाग्यो, दौडधुप शुरु::Hamro Koshi Awaj / awaz
सुनसरीका पत्रकारलाई चुनाव लाग्यो, दौडधुप शुरु
अध्यक्षमा जनकऋषि राई र सन्तोष काफ्लेबीचको भिडन्त पक्का, बागीको लर्को, कांग्रेसनिकट युनियनबाट अध्यक्षमै दुईजना बागी
२०७७ चैत २२
धरानः सुनसरीका पत्रकारलाई पनि चुनावले छपक्कै छोपेको छ । अहिले कुन पार्टीको प्यानललाई जिताउने भनेर पत्रकारहरु नै पनि दौडधुपमा लागिरहेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको आगामी चैत्र २५ गते हुने निर्वाचनका लागि सुनसरी जिल्लामा उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । यसपटक अध्यक्षका लागि जनकऋषि राई र सन्तोष काफ्ले चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । नामावली प्रकाशनपछि उनीहरुको भिडन्त पक्कापक्की भएको हो ।
जनकऋषि योसँगै तेस्रोपटक अध्यक्ष पदका लागि चुनाव लड्दैछन् । उनी नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस संगठन नेपाल (माओवादी केन्द्रनिकट) र प्रेस चौतारी नेपाल (माधव नेपाल र झलनाथ खनाल) को अलाइन्सबाट चुनावी मैदानमा छन् भने सन्तोष प्रेस चौतारीको दुई खेमामध्ये ओली समूहबाट एक्लै प्रतिस्पर्धामा छन् ।
काफ्लेले चुनाव आउनुअघि नै अध्यक्ष पदको लागि उम्मेद्वारी पक्कापक्की गरेर चुनावी मैदानमा होमिइसकेका थिए भने राईको अलाइन्सबाट आजैमात्रै अध्यक्ष पद टुङ्ग्याइएको थियो ।
राईको प्रस्तावकमा गंगा पौडेल (बराल) रहेकी छिन् भने समर्थकमा पवन अधिकारी छन् । यस्तै, काफ्लेको प्रस्तावकमा हिमाल दाहाल र समर्थकमा चन्दन गुप्ता रहेका छन् ।
यस्तै, राई प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा गणेश निरौला रहेका छन् । महिला उपाध्यक्षमा उषाकिरण भट्टराई, रञ्जना पौडेल, स्वतन्त्र उपाध्यक्षमा मनिता चाम्लिङ र ओलीनिकट प्रेस चौतारीबाट सुमित्रा राई (सञ्जु) चुनावी मैदानमा छन् ।
यस्तै, सचिव पदको उम्मेद्वारका लागि प्रेस चौतारीबाट दिनेश गजमेर, अलाइन्सबाट ध्रुव ढकाल र बागीमा भरतराज शर्मा (गोपाल), पर्शुराम (विनय) बाह्रकोटी रहेका छन् ।
यस्तै, सहसचिवमा अलाइन्सबाट तिर्थबहादुर कार्की, प्रेस चौतारीबाट विकल रेग्मी रहेका छन् । यस्तै, हिमाल राई सहसचिवमै प्रेस युनियनबाट बागीमा उठेका छन् ।
यस्तै, समावेशी सहसचिवमा प्रेस चौतारीबाट निशान प्रकृति थारु र अलाइन्सबाट भोला श्रेष्ठ रहेका छन् भने प्रदीपकुमार चौधरी बागीमा उठेका छन् । कोषाध्यक्ष पदका लागि अजिकुमार झा, कृष्णप्रसाद बहाव भट्टराई, निशान प्रकृति थारु चुनावी मैदानमा छन् ।
यसअघि अलाइन्सबाट गंगा बराल र राईमा को उठ्ने भन्ने थियो तर बराल एक कदम पछि हटेपछि राईको उम्मेदवारी पक्का भएको हो । ‘धेरैपटक उठेर कोसिस गरेको र यसपटक छोडिदिऔं भनेर छाडिदिएँ’, बरालले भनिन्, ‘उहाँको यसपटक राम्रै छ ।’ अध्यक्षमा बागी दिएका दुईजनाले नाम फिर्ता लिनसक्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आइतबार साँझ ६ बजेसम्ममा पहिलो नामावली प्रकाशन गरिएको छ । उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने समय भोलि दिउँसो २ बजेसम्म राखिएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली भोलि दिउँसो ४ बजे प्रकाशन गरिनेछ ।
आगामी २५ गते बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म पत्रकारहरुले उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ ।
धरानमा लाहुरे छनौट नहुने !
गाउँको ठिटो हङकङमा पुगेर कार चलाउँदा…
कोशीको छालमा भविष्य खोज्नेहरु
तत्काल स्कुल बन्द नहुने !
धनकुटाबाट गाँजा बोकेर धरान आएका युवा समातिएपछि सार्वजनिक
धरानका स्कुलमा अब आफ्नै पाठ्यक्रम
अब अनलाइन पत्रिकाको दर्ता खारेज नहुने
सुनसरीको हरिनगराका कृषकले फलाए कालो गहुँ
धरानमा पनि बनेछ मन तान्ने रोड !
धरान आउन लागेको टिपर ‘ब्याक’ गर्दा ठक्करले गुरुङको मृत्यु
कोशीमा हामफालेका वृद्धको तत्कालै उद्दार
अब काकडभिट्टा-बुटवलको सडक चार लेनको बन्ने
धरानमा खुरुखुरु पानी आउन थालेको हो ?